२० दिन पछि देखिएका किम जोङ उन सक्कली कि नक्कली ? सुरु भयो नयाँ बहस – Koshidaily
मुख्य पृष्ठप्रवास२० दिन पछि देखिएका किम जोङ उन सक्कली कि नक्कली ? सुरु भयो नयाँ बहस
२० दिन पछि देखिएका किम जोङ उन सक्कली कि नक्कली ? सुरु भयो नयाँ बहस
२४ बैशाख २०७७, बुधबार ०६:१७ प्रकाशित
उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन पछिल्लो दिन प्योङ्गयाङमा २० दिनपछि देखिए । यससँगै थुप्रै हप्तासम्म चलेको उनीबारेको अफवाहमाथि अब बिराम लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर यस्तो हुन सकेन । किमका जुन तस्बिर सार्वजनिक भए त्यसबारे सोसल मिडियामा बहस सुरु भएको छ । वास्तवमा, किमको रुपमा सार्वजनिक भएका ती व्यक्ति वास्तविक किम नभई उनका ‘बडी डबल’ भएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, यसमा कत्तिको वास्तविकता छ, त्यो भन्न मुश्किल छ ।
‘किमले आफ्ना बडी डबल प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य कसैबाट लुक्न सकेको छैन,’ इन्टरनेशनल बिजनेस टाइम्स (आइबीटी)ले भन्यो ।सन् २०१७ मा सनले किम जोङ उनले आफ्ना केही बडी डबललाई भेटेको भिडियो सार्वजनिक गरेको थियो ।आइबीटीका अनुसार मानवाधिकारकर्मी जेनिफर जेङले यी दुई बीचको भिन्नताबारे पहिलो पटक कुरा गरेपछि यसले धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेकोहो ।‘मे १ मा देखिएका किम जोङ उन सक्कली हुन् ?’ उनले ट्वीटरमा किमका नयाँ र पुराना तस्बिरबीच गरिएको तुलनासहितको तस्बिर पोस्ट गर्दै सोधिन् ।
दाँतमा भिन्नताः सोसल मिडियामा सेयर गरिएको तस्बिरलाई ट्वीट गर्दै बेलायतकी लुईजी मेन्सले पनि सार्वजनिक भएका व्यक्ति किम नभएको दाबी गरेकी छिन् । यी दुई तस्बिरमा किमको दाँतमा स्पष्ट भिन्नता देख्न सकिन्छ जसको आधारमा यी दुई व्यक्ति भिन्न भएको बताइएको छ । यद्यपि, यसमा जुन नक्कली कम बताइएको छ, त्यो तस्बिर एडिट गरिएको पनि दाबी गरिएको छ किनभने त्यो प्योङ्गयाङमा खिचिएको ताजा तस्बिरसँग मेल खाँदैन ।
कान पनि भिन्नः यसबाहेक किमको कान पनि भिन्न भएको बताइएको छ । पुरानो र नयाँ तस्बिरमा कानको लोती भिन्न देखिएको छ । यद्यपि, अन्य केहीले दाबी गरेअनुसार यो तस्बिर निकै पुरानो हो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म किमको अनुहारको बनोट अत्यधिक परिवर्तन भइसकेको छ ।
शल्यक्रियाको दाबीः सबैभन्दा धेरै चर्चा सायद किमको नाडीमा देखिएको चिन्हको विषयमा भइरहेको छ । उक्त दाग अथवा चिन्ह शल्यक्रियाको हो भन्ने अड्कलबाजी गरिएको छ । शल्यक्रियापछि नै उनको स्वास्थ्य खराब भएको भन्ने अफवाह उडेको थियो । यहाँसम्म कि कतिले त उनको मृत्यु नै भइसकेको दाबी गरेका थिए । यद्यपि, दक्षिण कोरियाले उनको कुनै पनि शल्यक्रिया नभएको दाबी गरेको छ ।
रोचक कुरा के छ भने किम मात्रै होइन, उनकी बहिनी पनि नक्कली भएको दाबी गरिएको छ । उनको तस्बिर पनि पुरोना तस्बिरसँग दाँजेर प्योङ्गयाङले केही दिन अघि आयोजित कार्यक्रममा उनको पनि बडी डबललाई उपस्थित गराइएको दाबी गरिएको छ । स्रोतः न्यूयोर्क पोष्ट, नवभारत टाइम्स